चन्द्रमामा विक्रम ल्याण्डर अवतरण भएको स्थानमा पत्ता लाग्यो ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
चन्द्रमामा विक्रम ल्याण्डर अवतरण भएको स्थानमा पत्ता लाग्यो !
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १७:३९
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र (इसरो) ले चन्द्रयान-२ ल्याण्डर विक्रम चन्द्रमाको सतहमा फेला पार्न सफल भएको छ । इसरोका अध्यक्ष डा. के सिवनले आइतबार चन्द्रमामा विक्रम ल्याण्डर अवतरण भएको स्थानमा पत्ता लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
इसरो ७ सेप्टेम्बरमा अन्तरिक्ष विज्ञानमा इतिहास रच्ने नजिक थियो । तर, चन्द्रयान-२ को ल्याण्डर विक्रमको ल्याण्डिङभन्दा मात्र ६९ पहिलो पृथ्वीसँग सम्पर्क टुटेको थियो । चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा ल्याण्डर विक्रमको शनिबार बिहान भारतीय समयअनुसार १ बजेर ५३ मिनेटमा ल्यान्डिङ हुनुपर्ने थियो ।
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०७६, आईतवार १७:३९